Injifannoon Adwaa aarsaa saboota hundaan galmaa'eedha
Waggaa 122 dura wayita Xaaliyaaniin Itoophiyaa humnaan weeraruuf yaalte sabootni biyyattii marti addaddummaa amnatii, gosaa, siyaasaafi ilaalchaa qaban boodatti dhiisuun hundisaanii tokkummaa biyyummaatiin waliin hiriiraniiru. Hiriiruu qofa osoo hintaanes gamtaa tokkoon waraan faashitii meeshaa ammayyaa hidhatee dhufe qolachuun injifannoo gonfataniiru.
Injifannoo boonsaan yeroo hedduu akka waan olaantummaa saba tokkootiin qofa argametti leellifamaafi faarfamaa ture. Kun immoo ijaarsa biyyattii keessatti tokko mataa ol qabatee kaan akka mataa gadi buusu taasisee ture. Akka fakkeenyaatti ummanni Oromoo waraana Adwaa irratti aarsaa guddaa kan kaffale ta'us, akka waan qooda tokkollee keessaa hinqabneetti waa'een injifannoo Adwaa yommuu odeeffamu gurra itti hinkennu ture.
Ilaalchi kun garuu sirrii akka hintaaneefi Adwaan bu'aa wareegama sabaafi sablammoota biyyattii akka ta'eedha hayyoonni seenaas kan ibsan. Akka hayyoonni jedhanitti, injifannoon Adwaa tokkummaa sabaafi sablammootaatiin galmaa’e. Oromoonis kan keessatti qooda mataasaa ba'ateera.
Mootiin biyyattii yommuusii duula qolannaa weeraraa yammuu waamanitti sabaafi sablammoonni biyyattii daangaa arfaniiyyuu irratti hirmaatanii injifannoo boonsaa kana akka galmeessanidha kan himan. Gootota Adwaarratti hirmaatan keessaa Aluulaa Abbaanaggaa kaabarraa, mootii Mikaa'el Walloorraa, Gabayyoo Gurmoo, Baalchaa Saafoo, Haabtagoorgiis Dinagdee (Qusee Diinagdee) giddugaleessarraa isaan jajjaboo ta'uu seenaan ni kaasa.
Injifannoo Adwaarratti gootota Itoophiyaa hirmaatan keessaa muraasni bara dulluma isaanittillee weerara lammaffaarratti qolannaaf hirmaataniiru. Isaan keessaa ammoo Baalchaa Saafoon hangafa akka turan seenaan ni kaasa.
Akka hayyoonni jedhanitti, Guraandhala 23, bara 1888 injifannoon Adwaarratti galmaa’e gurraachoota maraaf mallattoo injifannoo ta'uu ibsu. Seenaawwan addunyaarratti injifannoo olaanaa ta'uun galmaa’an keessaas Adwaan isa jabaa ta'uu himu.
Waan kana ta'eef injifannoo kana akka waan sabni tokko qofaa fideetti ilaaluuniifi seenaa injifannichaa dhaga'uu jibbuun eenyuu irraayyuu kan eegamu miti. Keessumaa hayyoonni seenaafi abbootiin waa'ee injifannoo kanaa beekan injifannoon argamee ture kun kan saboota hundaa ta'uusaafi hunduu ittiin boonuu akka qabu barsisuu qabu.
Dhaloonni ammaas seenaa biyya ormaa qorachuufi faarsuurra seenaa ofii gaafachuun eenyummaa isaaniitiin boonuun irraa eegama. Injifannoo abbootiin galmeessisan kanas biyya tokkummaa ishee eeggatte dhalootaaf dabarsuufis ga’ee isaanii ba’achuu qabu. Wayita ammaas duula biyyattiin hiyyummaa hir'isuurratti taasisaa jirturratti tokkummaan hiriiruudhaan isaan ammoo ashaaraa mataasaanii kaa'anii darbuun irraa eegama.
Walumaagalatti, seenaa boonsaan kun akka hindagatamneefi dhalootatti abbummaan akka dhaga'aamuuf miidiyaaleenis yommuu guyyichi ga'u qofa osoo hintaane yeroo kaanis haala dhaloonni seenaa baraturratti hojjechuu qabu. Sirni barnootaa biyyattiis seenaa biyyattiif daran xiyyeeffannaa kennuun irratti hojjechuu qaba.
Torban kana/This_Week 11161
Torban darbe/This_Month 97518
Guyyaa mara/All_Days 1435941